Kangton - Nagu saabsan - Warshadaha Kangton, Inc.
Warshadaha Kangton, Inc. waa bixiyaha xalka mashruuca ee ka sarreeya Dabaqa Ganacsiga, Albaabka iyo Golaha Wasiirada.
Laga soo bilaabo 2004, waxaan wadaagnay suuq wanaagsan adduunka oo dhan, gaar ahaan Waqooyiga Ameerika, Yurub, Australia iyo Koonfurta Ameerika.
Dabaqa Vinyl ee Ganacsiga, Dhulka SPC ee adag, Dabaqyada Injineerka Looxa ah, Dabaqa SPC Alwaaxa, Dabaqa Laminate, Bamboo Flooring, iyo WPC Decking
Albaabka Horudhaca ah, Albaabka Qoryaha, Albaabka Qiimaynta Dabka, Albaabka adag ee laga soo galo
Golaha Jikada, Dharka, iyo Wax -ka -beddelka
Iyada oo leh CE, Floorscore, Greengard, Soncap, shahaadooyinka FSC iyo tijaabinta Intertek iyo SGS.
Alaabooyinkayagu waa heer tayo sare leh, oo ay si guul leh u aqbaleen sumcad weyn, hanti ma guurto ah, soo-saare iyo shirkad iibiyaha adduunka oo dhan.Waxaad ka heli kartaa alaabtayada mashaariicda kala duwan ee Waqooyiga Ameerika, Yurub, Australia, Koonfur Bari Aasiya, Koonfurta Ameerika, Mi- Bari iyo Afrika.
Kangton wuxuu xulo lamaanaheena istaraatiijiyadeed ee leh heerka tayada caalamiga ah. Waxaan si adag u xakameynnaa tayada oo aan bixinnaa kormeerka QC inta lagu jiro wax soo saarka iyo ka hor inta aan la rarin. Dhammaan macaamiisheena waxay heli doonaan warbixinta QC oo leh sawirro faahfaahsan markab kasta. Waxaan mas'uul ka nahay qiimaha tartan xoog leh, tayo sare leh iyo horumarinta badeecad cusub.
Adeegga DDP waa la heli karaa, waxaa ka mid ah dhoofinta, canshuurta, waajibaadka, khidmadaha albaabka. Hadafkayagu waa inaan u abuurno macmiishayada qiimo dheeraad ah oo aan wadajir u horumarinno.
Wax kasta oo aad u baahan tahay albaab, sagxad ama kabadho, waxaan aaminsanahay in Kangton uu ku siin doono xalka xirfadeed ee ugu fiican.
Waa maxay sababta Kangton?
Kangton, waxaad ka heli doontaa albaab ganacsi oo sarreeya, sagxad iyo kabadh si aad si fiican ugu dhigto gurigaaga.
Kangton, waxaad ku badbaadin doontaa kharashka iyo waqtiga ugu badan ee suurtogalka ah baahiyahaaga.
Kangton, waxaad ka heli doontaa xal xirfadeed oo lagu kalsoonaan karo iyo adeeg aad u fiican.
Tan iyo 2004, Kangton Industry, Inc. soo galay goobta dhismaha dhismaha iyada oo taageero ka heleysa ISO, shahaadooyinka CE. Iyada oo kor u qaadis xoog leh ku leh B2B iyo bandhigyo, Kangton si dhakhso leh ayey u yaqaannaan iibsadayaasha caalamiga ah, horumariyaasha iyo shirkadaha guryaha, si ay u noqdaan mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan uguna horreeya alaab -qeybiyeyaasha xalka mashruuca ee Shiinaha.
Kangton wuxuu bixiyaa baaxadda ugu ballaaran, oo bixisa xulashooyin aad u ballaaran oo kala duwan oo ku habboon dhammaan dhadhanka, deggenaanshaha ama ganacsiga, gudaha ama dibedda, dhaqanka ama casriga ah, caadiga ah ama fasion, fudud ama gaar ah. OEM sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Lahaanshaha guri gaar ah maahan riyo Kangton.
Khadka wax -soo -saarka heerka koowaad iyo qalabka laga keeno Jarmalka iyo Japan, ayaa Kangton Door, Floor iyo Cabinet ka dhiga heer sare. Siyaasadda xakamaynta tayada adag ee ku wajahan hab -raac kasta inta wax -soo -saarka la hubinayo in tayada kangton ay tahay 3 -da sare ee Shiinaha. Tusaale ahaan, qoryaha aan gacanta ku soo qaadannay ayaa loo qaybiyey inay noqdaan A, B, C, D oo leh digsi qallalan 8-10% oo ka kooban biyo. Kooxda QC ee madaxa -bannaan ayaa soo afjaraysa dhammaan alaabtii shixnad kasta ka hor inta aan la dirin. Kangton runtii waxay bixisaa alaab si fiican kuu qancin doonta.
Ahaanshaha saamilayda warshadda iyada oo loo marayo maalgelinta lacagta ayaa ah habka Kangton uga heli karo xigasho hoose warshadda. Dhoofinta Kangton in ka badan 120,000 albaabbada kumbiyuutarrada sanadkiiba, iibsashada xaddi badan ayaa Kangton ka dhigaysa qiimaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Ka sokow, si looga caawiyo macaamiisha inay macaash badan helaan oo ay ku yeeshaan tartan tartan suuqyadooda, Kangton wuxuu hayaa faa iido hoose. Saddexdan arrimood waxay kuu xaqiijinayaan inaad bixiso kharashka ugu hooseeya adiga oo la shaqeeya Kangton.
Dooro Kangton micnaheedu waa inaad dooranayso koox farsamo oo xirfad leh si ay kuugu shaqeeyaan. Injineeradeena waxay ku jireen beerta alaabta qurxinta in ka badan 17 sano waxayna awoodaan inay ku siiyaan doorashada ugu ballaaran qaab dhismeedka, naqshadeynta iyo rakibidda.
Kangton waxaa laga iibiyay dalal adduunka oo dhan oo ay ku jiraan USA, Canada, Midowga Yurub, Australia,
Japan iwm, oo siisa kooxda iibinta Kangton khibrad buuxda iyo aqoon ku aaddan baahida suuqa.
Soo dhawow oo dooro Kangton
wadajir waxaan ku dhisi karnaa mustaqbal ifaya.